Hamra Khabar | » नेपाल मेडिकल टुरिजमको उत्कृष्ट गन्तब्य यसरी बन्न सक्छ नेपाल मेडिकल टुरिजमको उत्कृष्ट गन्तब्य यसरी बन्न सक्छ – Hamra Khabar
नेपाल मेडिकल टुरिजमको उत्कृष्ट गन्तब्य यसरी बन्न सक्छ
नेपालको मेडिकल र चिकित्सा क्षेत्रले स्थापना गरेको विश्वास र बजारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपालमा मेडिकल पर्यटन प्रवर्द्धनको आवश्यकता बढदै गएको छ । अध्ययन र उपचारको नाममा बिदेशिएको पैसालाई रोक्न र नेपालमै आर्थिक समृद्धि बढाउन मेडिकल टुरिजम विकास बोर्डको आवश्यकता समेत माग गरिएको छ । सरकारी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजको स्थापना तथा पव्लिक प्राईभेट पाटनर सिप मोडालिटिलाई प्रोत्साहन गरि शिक्षा तथा स्वास्थ्य टुरिजम क्षेत्रलाई विकास गर्न नेपाल मेडिकल टुरिजम बोर्ड गठन गरि बजेट बिनियोजन,र नीति नियम बनाएर अगाडी बढनु पर्ने कुराहरु आइरहेका छन । नेपालमा मेडिकल टुरिजमको बिकासका लागि राज्य स्तर बाट भन्दा निजि क्षेत्र बाट केही पहलहरु भएका छन । यसै सन्दर्भमा नेपालमा मेडिकल पर्यटन र प्रवर्द्धनको बारेमा काम गर्दै आएको संस्था नेपाल मेडिकल टुरिजम अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष कृष्ण पाण्डे सँग गरिएको कुराकानीको केही अंश
१) कोरोना भाइरस महामारीले सृजना गरेको संकट बाट सबै क्षेत्र प्रभावित छन, यस्तो अवस्थामा तपाईको दिनचर्याहरु कसरी वितिरहेका छन,कामहरु कसरी अगाडी बढाइरहनु भएको छ ?
– कोरोनाको प्रभावबाट विश्वव्यापी रुपमै संकट पैदा गरेको छ । स्वास्थ्य पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि अहिले आन्तरिक गृहकार्य गारिरहेका छौं । मेडिकल टुरिजम क्षेत्र तथा यसको व्यापारिक सन्जाल विकासको लागि भरचुअल मिटिंङ तथा कन्फ्रेन्स गरिरहेका छौं । स्वदेशी अस्पतालहरुसँग स्वास्थ्य पर्यटनको लागि समन्वय गरी भावि कार्य योजना बनाईरहेका छौ ।
२) तपाईको पहलमा बेला बेला नेपालमा मेडिकल टुरिजमका कुराहरु उठ्छन, खासमा मेडिकल टुरिजम भनेको के हो ?
– एक देशबाट अर्को देशमा सस्तो, राम्रो र भरपर्दो स्वास्थ्य उपचारको लागि जाने प्रकृयालाई मेडिकल टुरिजम भनिन्छ । मेडिकल टुरिजमको व्यवस्थापनको लागि निम्न अनुसार सहकार्य आवश्यक छ ।
– दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति
– स्वास्थ्य बिमा तथा बिमा प्रशासकीय कम्पनी
– स्वास्थ्य सेवा सहजकर्ता (Healthcare Facilitator)मेडिकल टुरिजम कम्पनी
– ट्राभल एजेन्सी
– होटल तथा गेस्ट हाउस
– निति निर्माण तथा सुरक्षाको लागि सरकारी निकाय
स्वास्थ्य सेवा सहजकर्ताको काम बजार व्यवस्थापन गर्ने हो । याे विना स्वास्थ्य पर्यटन क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । स्वास्थ्य सेवा सहजकर्ताले स्वदेशी तथा विदेशी बिरामीहरुको घर देखि घर मतलव भर्ना देखि डिस्चार्ज सम्मको सम्पुर्ण जिम्मेबारी लिएर काम गरेको हुन्छ । यो प्रकृयामा स्वास्थ्य सेवा सहजकर्ताले निम्न अनुसारका उत्तरदायित्व वहन गर्दछ ः
– बिरामीको रोगको प्रकृति अनुरुप सहि चिकित्सक तथा अस्पतालको चयन गर्ने ।
– निःशुल्क उपचार प्रकृया, प्रविधि, उपचार परामर्श तथा अनुमानित लागत उपलब्ध गराउने ।
– बिरामी तथा बिरामीको अभिभावककोे लागि उपचार भिसाको लागि सहयोग गर्ने ।
– सम्बन्धित क्षेत्रसँग सहकार्य गरि ट्राभल टिकटको व्यवस्थापन गर्ने
– एयरर्पाेर्ट देखि निःशुल्क यातायातको व्यवस्थापन गर्ने ।
– स्वास्थ्य पर्यटकको सुरक्षित बासस्थान तथा खानापिनाको व्यवस्था गर्ने ।
– बिरामी, चिकित्सक तथा अस्पताल व्यवस्थापनसँग सहकार्यताको भुमिका निर्वाह गर्ने ।
– बिरामीको भाषा सहजिकरणको लागि ट्रान्सलेटर उपलव्ध गराउने ।
– बिरामीको उपचार सहि मुल्य, पारदर्शिता तथा उपचार प्रगति बिरामीको अविभावक सँग अद्यावधिक गरिरहने ।
– बिरामीलाई गलत उपचार, बाह्य दलालहरु सँग बचाएर सकुसल स्वस्थ बनाएर घर पठाउने ।
– बिरामीलाई पहिलेनै उपचारको अनुमानीत लागत उपलव्ध गराईएको हुन्छ, त्यस अनुरुपनै उपचार को भुक्तानीको पारदर्शिता, सहि उपचार, बिरामीको हक हित र संरक्षणको लागि काम गर्ने ।
– बिरामीलाई आपतकालिन परेको समयमा २४ घन्टै सेवा दिने ।
– बिरामीलाई कुनैपनि कानुनी समस्या भएमा त्यसको समाधान गरिदिने ।
३) खासमा नेपालमा मेडिकल टुरिजमको के सम्भावना देख्नु भएको छ, यसको बिकासको लागि अलि बढि जिम्मेवार निजि क्षेत्र हुन सक्छ कि राज्य ?
– नेपालमा मेडिकल टुरिजमको धेरै ठुलो सम्भावना छ । मेडिकल टुरिजमको विश्वव्यापी बजार अनुसन्धान गर्दा निजि क्षेत्रले नै नेतृत्व गरेको देखिन्छ । यसको व्यवस्थापनको लागि निति–नियम निर्माण तथा सहजिकरण गरि राज्यले अभिभावकको रुपमा भुमिका खेल्नु पर्दछ । नेपाल विश्व पर्यटकिय बजारले पहिलो श्रेणीमा मन पराएको देश हो । नेपाल हिन्दु तथा बौद्ध धर्मावलम्वीहरुको उद्गम स्थल मात्र नभई विश्वको उच्च शिखर सगरमाथा, तथा प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिएको देश हो । विश्वभरिबाट लाखौ पर्यटक नेपाल घुम्न तथा पारिवारिक भ्रमणमा आउने गर्दछन् । यिनै पर्यटकलाई मात्रै एलोप्याथिक, आर्युवेदीक तथा प्राकृतिक चिकित्सा पर्यटनको हिसावले प्रवद्र्धन गर्ने हो भने पनि ठुलो मात्रामा विदेशी रुपैयाँ नेपाल भित्रिन्छ । त्यती मात्र होइन नेपाल देखि उपचारको क्रममा विदेशीने पैशालाई समेत रोक्न सकिन्छ ।
४) यो विपद्को अवस्थालाई हामीले अवसरको रुपमा पनि सदुपयोग गर्न सक्छौ भन्नु भएको थियो , यो अवस्था कसरी अवसर बन्न सक्छ ?
– कोरोनाको माहामारिबाट विश्वव्यापी रुपमा ठुलो परिवर्तन हुनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्र मात्रै नभएर सम्पुर्ण क्षेत्रलेनै आफ्नो कार्य प्रविधि, प्रकृया र कार्यशैलीलाई नै परिवर्तन गर्ने समय आएको छ । नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रले गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवाको लागि कार्य क्षमता अभिवृद्धि, कुसल व्यवस्थापन तथा नयाँ प्रविधि विकासमा ठुलो लगानी गर्ने छन् जसको फल स्वरुप आन्तरिक मेडिकल टुरिजमको विकासमा टेवा पुग्नेछ भने अन्र्तराष्ट्रिय मेडिकल टुरिजमको प्रबद्र्धनको लागि पहल गरिनेछ । हामीले मेडिकल टुरिजमको स्ट्रक्चरल ईकोसिस्टम विकासको लागि काम गरिरहेका छौ । हामी आशावादि छौ कि आउने समयमा हाम्रो पहलले नेपालमा मेडिकल टुरिजमको विकासको लागि एउटा खुड्कीलो पार गर्ने छ ।
विश्व बजारमा कोरोनाको माहामारीले गर्दा सबै प्राईभेट अस्पतालहरुको अवस्था एकै प्रकारको छ । चाहे त्यो नेपाल, भारत, दुवई, युरोप, अमेरिका, सिंगापुर या थाईल्याण्ड होस सबैको औकात तथा लेवल एकै किसिमको छ । हामीले यो समयलाई सदुपयोग गरि कोरोना पछिको बजारमा प्रवेश गर्नको लागि पुर्व तयारी गर्नु पर्दछ । अहिलेको हाम्रो नेपालको नजिकको प्रतिस्पर्धि भारत हो । भारतको कोरोना पश्चातको स्थिति धेरै नै भयाभह हुनेछ । अहिले भारत विश्वकै कोरोना प्रभावित देश मध्ये तेस्रो स्थानमा छ भने यसले पहिलो अग्रणी स्थान लिन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । यहि कारणले गर्दा अन्र्तराष्ट्रिय स्वास्थ्य क्षेत्रमा भारतको स्वास्थ्य स्थिति धेरै नाजुक देखिनेछ भने बिदेशी मेडिकल टुरिष्टको रोजाई नेपाल पर्नेछ । यसलाई नेपालले एउटा प्राकृतिक अवसरको रुपमा पनि फाइदा लिनेछ ।
५) यहाँहरुले मेडिकल टुरिजमको लागि नेपालमा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरका सम्मेलनहरु पनि सम्पन्न गर्नु भयो , अन्र्तराष्ट्रिय स्तर बाट नेपालको मेडिकल टुरिजमलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भएको छ ?
– हामीहरुले २०१८ र २०१९ होटल याक एण्ड यतिमा गरि २ वटा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको मेडिकल टुरिजम एशिया समिट सफलताका रुपमा सम्पन्न् गरेका छौं । जसको फलस्वरुप नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिदेशी लगानी र प्रविधि भित्राउने तथा विदेशी अस्पतालसँग समन्वय गरीे कार्यक्षमता बृद्धिका कार्यहरुमा सहकार्यको लागि अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट सकारात्मक दृष्टिकोण पार्यौ ।
६) केही समय अगाडी तपाईहरुले राज्यलाई समेत ध्यानार्कषण गराउदै मेडिकल टुरिजम विकास बोर्डको गठन गर्न अनुरोध गर्नु भएको थियो , राज्यले यसको आवश्यकता र महत्व महसुस गरेको जस्तो लाग्छ त ?
– नेपालले विगत लामो समय देखि स्थायी र विकासमुखी सरकार पाउन सकेको छैन । हामी अहिले ट्रान्जीसन फेजमै छौ । संविधानका निती नियमहरु पुर्ण रुपमा नियमन हुननै बाँकी छ । सुरुमै सवै योजनाहरु परिपक्क हुँदैनन् । हरेक आयोजनाले विस्तारै विस्तारै गति लिन्छ । नेपालको अर्थ बजारको उदाहरण लिने हो भने पनि विगत १५ वर्ष देखि संघर्ष गरेर आज बल्ल हाम्रो शेयर बजारले नयाँ मुहार पाएको छ । त्यस्तै यो हाम्रो पहल नेपालमा मेडिकल टुरिजम क्षेत्रको विकासको लागि नयाँ अभियान हो यसलाई पुर्ण रुपमा लागुगर्न केहि समय लागेपनि यसले सफलता हात पार्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौ । नेपालमा मेडिकल टुरिजम विकास भयो भने उपचारको लागि विदेशीने खरबौ रुपैंया नेपालमै रोकिन्छ साथै बिदेशी मुद्रा समेत आर्जन गरि नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाई संबृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । हाम्रो सरकारले उत्पादन भन्दापनि सेवामुखि उद्योगलाई प्रबद्र्धन गर्ने हो भने सजिलै देशको आर्थिक घाटा परिपुर्ति गर्न सक्दछ । नेपालको आर्थिक सुचाँक डाटा हेर्दा स्वास्थ्य पर्यटन उद्योगलाई मात्र प्रवद्र्धन गर्ने हो भने २० देखि २५ प्रतिशत व्यापार घाटा परिपुर्ति हुन सक्दछ । स्वास्थ्य टुरिजम उद्योगलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकताको रुपमा लिनु पर्दछ । यसको प्रर्बद्धनको लागि नेपाल मेडिकल टुरिजम बोर्ड गठन गर्न आवश्यक छ भने यसको संस्थागत मागको लागि हामी निरन्तर लडिरहेका छौ ।
७) यदि नेपालमा मेडिकल टुरिजमको बिकास भयो भने नेपाललाई हुने फाइदाहरु के के हुन सक्छन ?
– नेपालमा मेडिकल टुरिजमको विकास भयो भने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र आत्म निर्भर हुन्छ, बिदेशीएका तथा बेरोजगार लाखौ स्वास्थ्य जनशक्तिले स्वदेशमै रोजगार पाउँछन्, उपचारको लागि बाहिरिने खरबौं रुपैंया नेपालमै रोकिन्छ भने बिदेशी मुद्रा आर्जन भई नेपाललाई आर्थिक क्षेत्रमा संबृद्ध बनाउँछ । नेपाल एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय रिसर्च सेन्टर बन्न् सक्छ । त्यतिमात्र नभएर मेडिकल टुरिजमसँग जोडिएका क्षेत्रहरु जस्तै होटल, ट्राभल, एयरलाईन्स, औषधी उत्पादक, ईन्सुरेन्स व्यवसायमा समेत उल्लेख्य विकास हुनेछ ।
८) अन्तमा केही सल्लाह सुझाब छ ?
– यो मेडिकल टुरिजम विकास कुनै व्यक्ति विशेषको फाईदाको लागि अभियान होईन । यो एउटा सिंगो नेपाल राष्ट्रको संबृद्धि, स्वास्थ्य तथा टुरिजम क्षेत्रको दिगो बिकासको संयुक्त पहल हो । यसले पढेलेखेका युवा जनशक्तिलाई नेपालमै रोजगाारको व्यवस्था सृजना गराउँदछ भने उपचारको लागि नेपाली पैसा बिदेशीन बाट रोकी बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्न समेत ठुलो भुमिका खेल्दछ । यो अभियानलाई सफल बनाउन स्वास्थ्य पेशासँग सम्बद्ध सँस्था तथा सरोकारवाला एकजुट भई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा अगाडी बढाउन अनुरोध गर्दछु ।